महेश तिमल्सिना ||4May, 2022
‘काठमाडौंलाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर र सुरक्षित बनाइ घुम्नै पर्ने विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय सहर बनाउँने मेरो सपना हो,’ यो सपना काठमाडौं महानगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्नका लागि अहिले चुनावी दौडमा रहेकी एक महिलाको हो । न चर्का भाषण, न अरुमाथि गाली गलौज, न अरुको आलोचना, न त धेरै तामझाम । आफ्नै लयमा जनतामाझ छिन्, उनी । अहिले उनी आफ्नो सपनाको काठमाडौंबारे आम मतदातालाई सुनाउँदै हिँडेकी छन् । उनी हुन्–सिर्जना सिंह । जसलाई नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ ।
मेरो प्रमुख प्रतिबद्धता नै सुशासन हो । किनकी काठमाडौंमा सुशासनको खाँचो छ, सुशासन कांग्रेसको जितलेमात्र सम्भव छ ।
४० को दशकदेखि महानगरलाई कर्मघर बनाएकी सिर्जना यहाँका समस्या र चुनौतिसँग परिचित छिन् । त्यसैले उनी महानगरको रुप बदल्न चाहन्छिन् । महानगरबासीलाई सुशासनको अनुभूति गराउन चाहन्छिन् । ‘मेरो प्रमुख प्रतिबद्धता नै सुशासन हो । किनकी काठमाडौंमा सुशासनको खाँचो छ,’ उनको दावी छ, ‘सुशासन कांग्रेसको जितलेमात्र सम्भव छ ।’
व्यवस्थित काठमाडौं बनाउने सिर्जनाको संकल्प छ । उनी भन्दै थिइन्, ‘तपाईंहरुले खोजेको जस्तो काठमाडौं म बनाउँछु । यहाँका बालबालिका, युवा तन्नेरीदेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई सरकार भएको अनुभूति गराउँछु । मेरो नाम अब कर्मले चिनाउँछु ।’
यसअघि २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पासा पल्टाएको ठाउँ हो, काठमाडौं महानगरपालिका । त्यतिबेला एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याएर महानगरको मेयरमा विजेता भएका थिए । उनलाई कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २ सय ६९ मतले पछ्याएका थिए । यसैगरी, तेस्रो नम्बरमा विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु न्यौपाने (दर्शना) ले २३ हजार ४ सय ३९ मत ल्याएकी थिइन् भने चौथो नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार किशोर थापाले १८ हजार ४ सय ९६ मत ल्याएका थिए ।
अहिले परिस्थिति अलि फरक छ । एकातिर एमाले टुक्रिएको छ, कांग्रेसलाई गठबन्धनको साथ छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह र विवेकशील साझा पार्टीकी उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटालगायतले ल्याउने मतको आकारले सिर्जनाको हारजितलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।
सिर्जना भने आफ्नो विजयप्रति आश्वस्त छिन् । ‘मेरो उम्मेदवारीप्रति आम मतदातामा उत्साह छाएको छ,’ मेरो लाइफस्टाइलसँगको कुराकानीमा उनी भन्दै थिइन्, ‘पक्कै पनि एकपटक काठमाडौंले मलाई मौका दिने छ ।’
अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
‘परिवारवादको आलोचना सम्पूर्ण महिलाको अवमूल्यन हो’
काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसबाट मेयरको टिकट पाउनुभएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी नै किन ?
मेरो उम्मेदवारी काठमाडौंलाई सुशासन दिनका लागि हो । काठमाडौं महानगरलाई स्वच्छ राख्ने मेरो सपना हो । अर्को कुरा म एउटी छोरी, बुहारी, आमा, सासु पनि हो । त्यसैले एउटी महिलाको जीवनमा आउने हरेक उत्तारचढावसँग म परिचित छु । र, त्यसलाई कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव पनि मैले बटुलेकी छु । त्यतिमात्र होइन महिलाको हक हित, सशक्तिकरण, उत्थान र युवा जागरणका लागि अनवरत रुपमा लागि रहेको छु । पार्टीको विभिन्न तह र तप्कामा बसेर काम गरेको अनुभव पनि मसँग छ । त्यसैले काठमाडौंको मुहारलाई चम्किलो बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताको मन जित्न तपाईंका योजना के–के छन् ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै सुशासन हो । काठमाडौंमा सुशासनको खाँचो छ । त्यो सुशासन कांग्रेसको जितलेमात्र आउँछ । साथै, यहाँको अर्को समस्या भनेको बेरोजगारी हो । त्यसलाई समाधान गर्ने मसँग धेरै उपायहरु छन् । यसैगरी, काठमाडौंको अर्को चरम समस्या सरसफाईको हो । यहाँका घर तथा उद्योगबाट निस्किएका फोहोरलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारको ध्यान गएन । त्यसैले यहाँको फोहोरलाई मोहोर बनाउने योजना मसँग छन् ।
यसैगरी, काठमाडौंबासीले भोगेको अर्को समस्या ट्राफिक अस्तव्यस्तता पनि हो । यसलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नेछु । त्यस्तै, सबै वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन खोल्ने मेरो प्रमुख एजेण्डाअन्तर्गत छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापनाका साथै काठमाडौं महानगरबासीका लागि बेग्लै अस्पताल खोल्ने पनि मेरो योजनामा छन् । काठमाडौंको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, मठमन्दिर, गुठी सम्पदा र सभ्यतालाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएकी छु ।
महानगरलाई प्रविधिमैत्री बनाउँछु । महानगरबासीले आफ्ना अधिकांश काम घरबाटै लिन सक्ने बनाउँछु । यसपछि भने भ्रष्टाचारमुक्त महानगर बनाएरै छाड्छु । घर नै फोहोर भयो भने बाहिर ठूला कुरा गरेर केही पनि हुँदैन ।
यतिबेला घरदैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, मतदाताहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ । म त राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ताका साथै घर पनि सम्हालेर आएकी महिला हुँ । त्यसैले महानगरबासी मेरो आगमनले उत्साही हुनुहुन्छ । काठमाडौं आजभन्दा भोलि दुर्गन्धित, अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । यसलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित गर्न सिर्जनाकै खाँचो छ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाले मलाई बलियो बनाएको छ ।
काठमाडौंलाई कस्तो शहर बनाउने तपाईको सपना हो ?
काठमाडौंलाई स्वच्छ सफा, सभ्य,सुन्दर, सुरक्षित वातावरण सिर्जना गरी विश्वमा घुम्न जानैपर्ने पर्यटकीय सहरहरुको उच्च स्थानमा राख्ने मेरो सपना हो ।
तपाईले मेयरको टिकट पाउँदै गर्दा परिवारवादको कुरा पनि आयो । के भन्नुहुन्छ ?
म त प्रकाशमान सिंहलाई नचिन्दै राजनीतिमा होमिएकी मान्छे हुँ । मेरो युवावस्था प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेरै बित्यो । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि आन्दोलनका क्रममा हनुमानढोकाको चिसो छिँडीमा पटक–पटक पुगेकी महिला हुँ । कांग्रेसले एक चर्चित नेताकी श्रीमतीलाई काठमाडौंको मेयर बनायो भन्ने जस्ता आलोचनाले सम्पूर्ण महिलाको अवमूल्यन भएको छ ।
तपाईले टिकट पाएकोमा कांग्रेसका आकांक्षीहरुको असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
आकांक्षीहरु सबैजना योग्य हुनुहुन्छ । मभन्दा सिनियर नेताहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, म कुनै पदमा नरहेपनि पार्टीका लागि काम गरिरहेकै थिएँ । त्यसैले पार्टीको महानगर कमिटिले सिफारिस गरेअनुसार पार्टीले मेरो नाममा निर्णय गर्यो । यो निर्णयलाई सबैले सहर्ष स्विकार्नु भएको छ । अब कुनै असन्तुष्टि छैन ।
तपाईं मेयर भएको पाँच वर्षपछिको काठमाडौं सहर कस्तो हुन्छ ?
स्वच्छ,सफा र सुरक्षितका साथै यसलाई व्यापारिक केन्द्र बनाएर देखाउँछु ।
काठमाडौं बासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
म काठमाडौं बनाउने दृढ संकल्प लिएर आएको छु । मैले देखेको सुन्दर, सफा अनि ऐतिहासिक काठमाडौं बनाउनका लागि तपाईंहरुको अमूल्य मतको खाँचो छ । पक्कै पनि तपाईंहरुले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
राजनीतिमा सिर्जनाको ‘सेकेण्ड इनिङ’
सिर्जनाको राजनीतिक चेतको सिर्जना भने गोरखाले गराएको हो । गोरखा बजारमा जन्मिएकी सिंह विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नै कांग्रेसनिकट थिइन् । २०३३ मा गोरखाका कांग्रेस नेता श्यामकुमार श्रेष्ठको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएसँगै सिर्जना राजनीतिमा सक्रिय रुपमा देखिन थालिन् । २०३४ मा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरेसँगै उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं झरिन् । अनि उनको पढाइका साथै राजनीतिक यात्रा महाबौद्ध क्याम्पसबाट सुरु हुन्छ ।
२०३५ देखि २०३८ सम्म सिर्जना महाबौद्ध क्याम्पसको इकाइ सभापति बनिन् । यहीक्रममा २०३६ मा देशमा जनमत संग्रह भयो । बहुदललाई जिताउनका लागि सिर्जना त्यतिबेला कटिबद्ध भएर लागिन् । २००४ मै मंगलादेवी सिंहको संयोजकत्वमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । राजनीतिमा सक्रिय रहेकी सिर्जना १७ वर्षकै उमेरमा नेपाल महिला संघ गोरखाकी सभापति भइन् ।
२०३८ मा जननायक विपी कोइराला बिरामी परे । विपीको उपचारका लागि नेविसंघले देशव्यापी रुपमा आर्थिक सहयोग उठाउने निर्णय गर्यो । विपीको उपचारार्थचन्दा उठाउने क्रममा उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । साथै, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा होमिँदा उनी कैयौं पटक गिरफ्तारीमा परिन् । अहिले पनि उनको स्मृर्तिमा आन्दोलनका ती दिनहरु ताजै छ । सम्झिइन, ‘हनुमानढोकोका चिसो भुइँसँग धेरै परिचित छु ।’
यहीक्रममा सिर्जना स्नातक(बिकम) अध्ययनका लागि शंकरदेव क्याम्पसमा भर्ना भइन् । त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा शंकरदेवबाट अघि बढ्यो । उनी भर्ना भएको एकवर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) निर्वाचन भयो । जसमा सिंह कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । पछि उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ पुरा गरिन ।
मैले परिवार सम्हालेँ, सासु (मंगलादेवी), ससुरा (गणेशमान), श्रीमान(प्रकाशमान) लाई पञ्चायतविरुद्ध लड्ने पारिवारिक वातावरण सिर्जनामा होमिएँ, म ।
…अनि राजनीतिक यात्रा ओझेल पर्यो
नेविसंघ र महिला संघको सक्रिय राजनीतिमा रहेकै बेला लौहपुरुष गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहसँग उनको विवाहको कुरा चल्यो । २०४२ फागुनमा प्रकाशमानसँग विवाह गरेर चाक्सीबारी छिरेसँगै सिर्जनाको राजनीतिक यात्रा ओझेलमा पर्यो । यो कुरामा सिर्जना पनि सहमत छिन् । ‘मैले परिवार सम्हालेँ,’ उनी भन्दै थिइन्, ‘सासु (मंगलादेवी), ससुरा (गणेशमान), श्रीमान(प्रकाशमान) लाई पञ्चायतविरुद्ध लड्ने पारिवारिक वातावरण सिर्जनामा होमिए, म ।’
सिंह परिवारमा उनी मंगलादेवीकी प्यारी बुहारी अनि गणेशमानकी ज्ञानी बुहारी बनिन् । सासु–ससुरामात्र होइन पति प्रकाशमानको राजनीतिक सफलताको पछाडि पनि सिर्जनाकै योगदान रहयो ।
पार्टीले राजनीतिमा मैले गरेको योगदानलाई कदर गरेको हो, गणेशमान सिंह परिवारको सदस्य भएर होइन ।
हाल महिला संघको केन्द्रीय सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकी सिर्जना कांग्रेसको ११ औं महाधिवेशनदेखि नै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा चुनिँदै आएकी छन् । त्यसो त काठमाडौं महानगरको उम्मेदवार बनाइरहँदा परिवारवाद भयो भन्नेहरुका लागि उनको जवाफ छ, ‘पार्टीले राजनीतिमा मैले गरेको योगदानलाई कदर गरेको हो, गणेशमान सिंह परिवारको सदस्य भएर होइन ।’
सिर्जनासंग उनको जीवन–कथा सुनिसकेपछि,उनले काठमाडौंलाई लिएर देखेको सपनासंग साक्षातकार हुँदा मनमा एउटा जिज्ञासा रहयो,त्यसो भए के यसपटक र पहिलो पटक काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा महिला प्रतिनिधित्व होला ?
[…] रेणु दाहाल ४३ हजार १२७ मत ल्याएर मेयरमा विजयी भएकी थिइन् । निकटम […]
'सेवा डिजिटल सिस्टममार्फत घरघरमै पुर्याउँछौँ ' - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सभापति समक्ष पौडेलले ‘सरेण्डर’ गर्लान् ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle